Bill Gates - Gpedia, Your Encyclopedia
William Henry "Bill" Gates III (28 Oktoobar, 1955). Waa nin ganacsade iyo programmer ah isla markaasna ah samafale. Waana ninka ugu hodantinimo badan caalamka. Bill gates iyo Paul Allen waxey wada asaaseen shirkada Microsoft sanadkii 1975kii.
Wuxuu ku dhashtay Seattle, washignton 29kii October 1955kii. Waalidkiisana waxaa la yiraahdaa William Henary Gates, bill gate
Sr. iyo Mary Maxwell Gates, waxaa la dhalatay Gates labo walaalo.
Wuxuu ku soo barbaaray yaraantiisa gates qooys magac ku leh taariikhda Siyaasadda iyo ganacsiga iyo adeega bulshada. Aabihii wuxuu ahaa Garyaqaan(Lawyer) sare, Hooyadiina waxey qabatay jago maamul jaamacada washignton. wuxuu aad ugu wanaagsanaa gates yaraantiisii iyo waliba xiligii iskuulka hoose maadooyinka sida Xisaabta iyo Scienceka, walidkiina waxey ogaadeen maskax furfurinada wiilkooda waxeyna geeyeen iskuulka (Lakeside) oo ku sareeyay heerka waxbarasho.Go'aankaasna wuxuu saameyn weyn ku yeeshtay nolosha gates waayo wuxuu markii ugu horeysay uu ku arkay Computerka. Gates wuxuu ka mid yahay ganacsatada ugu wanaagsan ee kacaankii kumpuyuterka. .intaas waxaa dheer in ay gabadhiis mida wayn oo dhalatay 1996 ee saaxibo yihiin wiil soomaaliyeed oo lagu magacaabo saadaq waxa kale oo ay saxiib wanaagsan isku yihiin wiil kale oo la dhaho Abdiladiif Aadan Maxamed Oo ku nool dalka Ruushka.
gatter waa naaneystii loogu yidhi xillligii waxbarashadiisa hoose taaso la micno ah diidey iaan quusto. Bill gates&paul alen ayaa 1975 waxay wada aas-aaseen shirkada microsoft
HADDA william henary gates bill gate waxaa lagu timaamaa ninka dunida ugu lacagta badan
waxaa taariikhdan kooban ka diyaariyay
Muascab Maxamed Maxamuud(Daljir)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bill_Gates&oldid=201092"